Matipi gumi eiyo Kukunda Gamification Strategy | Martech Zone
Matipi gumi eiyo Kukunda Gamification Strategy
NeChishanu, Gumiguru 19, 2018 Mugovera, October 20, 2018 Douglas Karr
Vanhu vanondinakidza. Vape yakanaka yekushambadzira meseji nemutengo uye ivo vobva vaenda ... asi vape iwo mukana wekuhwina bheji pane yavo peji peji uye ivo vanozoirwira. Ndiri kuzvivaraidza pandinowana ndichivhiringidzika kurasikirwa meya pa Foursquare - hazvina musoro. Ndizvo chaizvo gamification zvinoenderana ne.
Nei Gamification Ichishanda?
Gamification inoshanda kugutsa zvimwe zvezvishuwo zvevanhu zvakakosha: kuzivikanwa uye mubairo, chinzvimbo, kubudirira, makwikwi nekubatana, kuzviratidza, uye kuzvipira. Vanhu vane nzara yezvinhu izvi zvese mune yavo yemazuva ese nyika uye online. Kumisikidza matepi kunanga zvakananga mune izvi.
Bunchball ndiye mumwe wevatambi vari pamusika uyo unobatsira vatengesi kuita matekiniki ekumisikidza nemasaiti avo nemaapplication. Vakagovera whitepaper nyowani, Kukunda neGamification: Matipi kubva kune Nyanzvi's Playbook. Iyo yakanaka kuverenga. Heano mamwe akakosha ekuvandudza yako wega gamification zano:
Ziva Nharaunda - Kumisikidzwa kazhinji kunoda inotsigira Nharaunda. Izvo zvishuwo zvakakosha zvevanhu zvinosimbiswa kana vamwe vachizvipupurira. Izvo zvakakoshawo kuve nevamwe vanhu vekukwikwidzana navo uye kuenzanisa zviitwa.
Mepu zvinangwa zvako - Paunenge uchigadzira yako yekumusoro mhinduro, ita shuwa kuti unogadzira chimwe chinhu chinokwana pakati pakati pevashandisi ruzivo uye rako bhizinesi zvibodzwa.
Koshesa zviito iwe unoda kuti vashandisi vako vatore - Iyo yakanakisa nzira yekutaura izvi ndeyeastandard chinzvimbo system. Paunenge iwe waona izvo Zvezviitiko zvechirongwa chako, iwe uchazoda kuzviisa iwo maererano neukoshi. Kutanga neisina kukosha kukosha chiito uye chiipe icho chinhu che '1.' Kushanda kubva ipapo, ipa hama dzakatarwa kune zvese zvimwe.
Gadzira point point system - Mapoinzi inzira huru yekupa mubayiro mushandisi nekuita chimwe chinhu chakakosha kwauri (kureva, kutenga, kurodha pasi, kugovana). Ehe, mapoinzi anogona zvakare kuve nzira yevashandisi yekupa mubairo mumwe kune mumwe. Pakupedzisira, ivo vanofanirwa kushanda senzira yekupa vashandisi imwe nzira yekushandisa simba.
Shandisa mazinga - Edza kusarudza mavara anosiyanisa mukurumbira pakati peimwe nhanho. Nepo kushandisa manhamba ari akareruka, akangwara, enita mazita akasungirirwa mumusoro wechirongwa chako anogona kushanda zvakanyanya.
Gadzira mabheji anotaridzika anokwezva nemikombe - Paunenge uchigadzira bheji kana mukombe, ita shuwa kuti inoyevedza uye inoyevedza. Bheji rinofanirawo kuve rakakodzera kune vateereri uye dingindira re
Wedzera mibayiro - Mubairo unogona kuve chero chinhu chinokurudzira vashandisi vako: Points, Badges, Trophies, Virtual Zvinhu, Unlockable Zvemukati, Dhijitari Zvigadzirwa, Zvepanyama Zvipenga, Coupons, nezvimwe.
Shandisa chaiyo-nguva mhinduro - Yechokwadi-nguva mhinduro ndiyo yakanaka nzira yekuziva ipapo nekupindura kune vako vashandisi zvinoitwa.
Shandisa Virtual Zvigadzirwa - Virtual zvinhu zvakanaka kune poindi "kupisa" - chimwe chinhu chevashandisi kuisa poindi dzavo.
Nharembozha, Zvemagariro, uye Geo - Nharembozha, Yemagariro Media, uye Geographic kunongedzera kwakakura zvinowedzera kuchirongwa chako kana iwe uchikwanisa kusunga pamwechete ruzivo rwese rwekuyambuka-papuratifomu, riwane iro rakagovaniswa, uye tarise kwariri nenzvimbo.
Bunchball ndiye anotungamira mupi wemabhizimusi ekumisikidza, anoshandiswa kutyaira kwakakwirira kutora chikamu, kuita, kuvimbika uye mari. Bunchball's gamification chikuva chakanyanya scalable uye chakavimbika gore-based sevhisi yekutamba mawebhusaiti, enharaunda nharaunda, uye nharembozha. Bunchball yakateedzera anopfuura zviuru makumi maviri zvezviito zvinotungamira kuvimbika kwevatengi uye kubatirana kwevashandi kune vatengi vavo.
Dhawunorodha Kukunda neGamification: Matipi kubva kune Nyanzvi's Playbook
Tags: Bunchballmutengi gamificationmushandirapamwegamificationgamification appkukwirisa mazingagamification mapoinzigamification mibairomatipi ekumisikidza
Jun 24, 2011 pa3: 51AM
Kune avo vanofarira, Lithium iri kuisa paGamification webinar - http://mkt.gs/mg8EQk Chitatu, Chikumi 29, 2011 @ 11:00 AM PDT / 2:00 PM EDT